आमाले नवजात शिशुलाई छातीको देब्रेतर्फ च्यापेर राख्छिन् किन ?
पुस २३, २०७४ आइतवार १८:१०:१२ प्रकाशित
एजेन्सी– आमाले नवजात शिशुलाई प्रायः छातीको देब्रेतर्फ च्यापेर राखेका हुन्छन् । केही वैज्ञानिकले आमाले छातीको बायाँतर्फ बच्चालाई च्यापेर राख्दाको रहस्य पत्ता लगाएको बताएका छन्।
बायाँ भागमा राख्दा बच्चाको दिमागको दाहिने भाग सक्रिय हुने र यसले आमा तथा बच्चाबीच आत्मीयता बढाउने र बोल्न सहयोग गर्ने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ । दायाँ दिमागले स्मरण गर्नेदेखि अन्य महत्पूर्ण काम गर्छ । कसैकसैको बायाँ दिमाग सक्रिय हुन्छ, जस्तैः देब्रे हात चलाउने ।
बच्चालाई बायाँ भागमा राख्ने काम मानिसले मात्र होइन जनावरमा पनि उत्तिकै पाइने रसियाली अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। यस्तो व्यवहार स्तनधारी प्राणी कंगारु, चमेरोदेखि ह्वेल माछा, घोडा लगायतमा देखिन्छ।
आमाले बच्चालाई देब्रे छातीमा राख्ने प्रक्रिया बाँच्ने कला र सामाजिक सम्बन्धको उदाहरण भएको सेन्ट पिटर्सवर्ग स्टेट युनिभर्सिटीका डा. यगोर मालासिचेभले बताएका छन्। आमा र बच्चाबीच आँखा नजुधे दायाँ दिमाग सक्रिय नहुने उनको भनाइ छ।
देब्रे छातीमा बच्चाले आमाको मुटुको चाल समेत सुन्ने अवसर पाउँछन्। देब्रे छातीमा राख्दा बच्चा र आमाको आँखाको सिधा सम्पर्क हुने र बच्चाको दिमागमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने केही वैज्ञानिकको तर्क छ।
जब आमाले बच्चालाई बायाँतर्फ समाउँछिन्, आमा र बच्चाको दायाँ आँखा एक आपसमा जुध्ने र बच्चाले अझै बढी स्नेह महसुस गर्ने वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ। यसले बच्चाको दायाँ दिमागमा स्रव्य सूचना पुग्छ। दायाँ दिमागले ध्यान, स्मरण, तर्क र समस्या समाधानका उपाय अपनाउने गर्छ।
१. बलात्कार, मानसिक समस्या र अभिभावकको भूमिका
२. कान्ति अस्पतालका डाक्टरमाथि हातपात गर्नेलाई आपराधिक उपद्रवको मुद्दा लगाउने तयारी
३. सप्तरीमा देखिएको फ्लु नियन्त्रणमा आउँदै
४. बुबाको कात्रो उठाएपछि भाइरल तस्बिर, जसको सहयोगका लागि जुट्यो एकै दिनमा ३० लाख
५. मौसमी रुघाखोकीका ६ लक्षण र ११ बच्ने उपाय
६. स्वास्थ्यचौकीलाई जग्गा दान
७. भोजपुर : भिडियो एक्सरे मेशिन हस्तान्तरण
८. संविधान दिवसमा डाक्टर, नर्स, औषधि व्यवसायीसहित ३० भन्दा बढीले पाउने भए राष्ट्रपतिबाट पदक
९. होम डेलिभरी सेवा दिन नमान्ने रौतहटका नर्सलाई आक्रमणको धम्की, सुरक्षा माग्दै पाँच नर्स प्रहरी चौकीमा
१०. भाइरल ज्वरोले हर्दिगाउँ नै प्रभावित
१. संविधान दिवसमा डाक्टर, नर्स, औषधि व्यवसायीसहित ३० भन्दा बढीले पाउने भए राष्ट्रपतिबाट पदक
२. शल्यक्रियापछि मदनकृष्ण श्रेष्ठ डिस्चार्ज, के हो उनलाई लागेको रोग ?
३. होम डेलिभरी सेवा दिन नमान्ने रौतहटका नर्सलाई आक्रमणको धम्की, सुरक्षा माग्दै पाँच नर्स प्रहरी चौकीमा
४. मैले बिर्सिसकेको त्यो गर्भपतन
५. बुबाको कात्रो उठाएपछि भाइरल तस्बिर, जसको सहयोगका लागि जुट्यो एकै दिनमा ३० लाख